Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်)
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သို့ ဆေးညွှန်းစာအတိုင်း အစာနဲ့တွဲပြီး သို့ အစာမပါဘဲလည်း သောက်နိုင်ပါတယ်။
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
• dhamotil အခြားသောမကျန်းမာမှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အာ၊ နှာခေါင်း၊ အရေပြားခြောက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Barbituratesအိပ်ဆေးများ (e.g., phenobarbital)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သေချာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း(ဥပမာ အူမကြီးရောင်ခြင်း၊ enterotoxinထုတ်ပေးတဲ့ ဘတ်တီးရီးယား၊ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း)
အစာရေမျိုပြွန်ပြဿနာများ (ဥပမာ အစာမျိုရခက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းမှာ ဆေးပြားနှစ်ပြား10 mL (5 mg of diphenoxylate) သောက်ဆေး တစ်နေ့လေးကြိမ်
ကလေးတွေအတွက် Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၂နှစ်နှင့် ၂နှစ်အထက်ကလေး ပထမ0.3 to 0.4 mg/kg of diphenoxylateသောက်ဆေး တစ်နေ့လေးကြိမ်
Dhamotil (ဒါမိုတေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ